War saxaafadeed uu soo saraya Afhayeenka ururka SRRC ee Waqooyiga Amerika
October 27 2001 at 5:09 PM BAYDHABO PRESS
BAYDHABO Oct 27, 2001 (BP)-Afhayeenka ururka SRRC ee waqooyiga America mudane Cabdi Barre ayaa shir saxaafadeed ku canbaareeyey wax uu ugu yeeray maamulka Xamar martida ku ah ee C/sim Khiyaamada iyo jariimada xad dhaafka ah ee ay ka wadaan gobolladda Sh/hoose iyo Jubooyinka.
Afhayeenku wuxuu ku tilmaamay maamulka C/sim sida uu u dhaqmayo mid ku salaysan luggooyo, isku dir, iyo khayaamo lagu raadinayo in dhiig ku daato, taasoo waayo aragnimo fiican uu u yeeshay 21dii sano oo uu kaba qaadka u ahaa Macalimikii taba baray Siyad Barre.
Waxaa fajacisa ah iyaddoo saas loo yaqaan, in uu sameeyo kooxo been abuur ah kuna tilmaamay in ay samaynayaan beelo heshiisiin, iyo wax uu ugu yeeray in ay maamul gobolladda kor ku xusan ka samaynayaan, waxaa is weydiin leh isagu Xamar maamul ma ka sameeyey, jawaabtu waa maya ee wali marti magac been ah sheegatuu ku yahay.
Afhayeenka ayaa ku timaamay guddiyadaas maqaarsaarka ah in ninkaasi uu u xil saaray isku dirka beelaha wada daga nawaaxigaas iyo been abuur si uu C/sim ugu sii cimri dheereysto dhulalkaas uu xoogga ku haysto.
Afhayeenka wuxuu beeniyey warar ay saxaafadda siiyeen 2 nin oo uu ku tilmaamay "dhaan walba raac" oo kala ah; Zakariya iyo Moxamed C.Yuusuf wararkaasoo ay ku sheegeen in beelaha isku baheystay SRRC ee gobolladdas dagaa ay "Dad cadow ah u soo kaxeysteen deegaankaas, halgankooduna xaqdarro yahay". Wuxuu is weydiiyay afhayeenku in 2daas nin ay afkooda si xor ah ugu hadli karaan iyo iney ku beer laxawsanayaan ninka ay martida u yihiin!
Sidoo kale buu yiri, Cabdullaahi King Kong iyo Cabdi wali Indha-qurun ayaa ka mid ah martida aan xorta ahayn oo ku dadaaleysa in la sii cabiidsado dadka dhulkaas ku dhaqan iyo in reer Carta dulumkoodu dhulkaas ku raago ayaga oo shirar ka wada Xamar.
Afhayeenka ayaa hadalkiisi kusoo gabagabeeyay:
1-In aan guddiyadda C/Qasim dabada ka riixayo iyo raga hogaaminayaa ayan matalin beelaha dhulkaas degga.
2-In la doonayo isku dirka beelaha wada daga.
3-In cimri dheerar reer Carta halkaas looga raadinayo ilayn dhulkii kale ka socon waayee.
4) In ururka SRRC si kulul u canbaareenayo dhammaan ficiladaas kor ku xusan oo dhan,waxaanan ummadda soomaaliyeed u sheegeynaa buu yiri, in khayaamadda la maleegayo wixii ka yimaada ay kooxda C/sim mas'uul ka tahay.
Afhayeenka SRRC ee Waqooyiga Amerika